Ultrasonic Transducer, Ultrasonic Vibration Series, Ultrasonic jenareta - Qianrong
Iyo Yakanyanya Solution yeYako Ultrasonic Kunyorera
Iyo inyanzvi inogadzira yekutsvakisisa kweiyo ultrasonic, yakakwira simba ultrasonic transducer kuvandudza uye kugadzira muChina
Isu tiri muHangzhou, padyo neshanghai yenyika dzendege, ine mutemo wakakwana unoenderana uye kutenderera kwakanaka. Mumusika wepasi rose, isu tine ruzivo rwakakura rwekutengeserana.
QRsonic inotarisa pane kutsvagisa nekusimudzira kweiyo ultrasonic zvinhu uye kunyorera. Makore ano, michina yeQRsonic yakawana mukurumbira wakanaka kubva kune vatengi vedu muChina nemusika wepasi rose.
QRsonic inyanzvi Kugadzira kune ese marudzi eiyo ultrasonic mudziyo. Tinogona kugamuchira OEM & ODM, ichipa vatengi nemazere mhinduro yeiyo ultrasonic chikumbiro, musimboti kuyedza, zvikamu zvekugadzira uye nezvimwe.
20Khz Ultrasonic Yakagadziriswa Welding Horn neA ...
Yakakwira Frequency 20khz Ultrasonic Industrial homo ...
Yakakwira Frequency 35Khz 1000w Ultrasonic Kuisa chisimbiso E ...
Ultrasonic Mhangura Aluminium Shanduko 20Khz 300 ...
Nickel Mesh uye Nickel Plate Welding kubudikidza 3000w 2 ...
20Khz Ultrasonic Rubber Kucheka Midziyo ine 60m ...
20Khz 1500w Ultrasonic Welding Welding Transducer ine ...
15Khz 2600w Yakakwira Simba Ultrasonic Welding Oscil ...
Inotakurika Ultrasonic transducer Impedance kuongorora ...
40Khz Ultrasonic Nano Mwaya mudziyo pamwe High Fr ...
Small nemazvo Spraying Machine yeScientific ...
35Khz Ultrasonic Spot Welding Machine ine Digi ...
Kutsiva Tsika Yetsika uye Thread Sewing ...
15 Khz Ultrasonic Welding jenareta Transducer ...
Kupa 30Khz Ultrasound Kucheka Chidimbu cheR ...